musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » WHO Chief: COVID-19 Global Yetatu Wave Iri Pano
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Director General weWorld Health Organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus
Delta musiyano ikozvino mune dzinopfuura nyika zana negumi neshanu, saka iyo WHO inotarisira kuti munguva pfupi iri kuuya ndiyo inotungamira COVID-111 strain inotenderera pasirese, kana isati yatove.
Muvhiki yapfuura zviitiko zve COVID-19 zvaiwedzera pasirese, uye kufa kwakatanga kukwira kumusoro zvakare.
Musoro weWHO wakarova kupesana kunokatyamadza mukuparadzirwa kwemajekiseni epasi rose.
Kushaikwa kwekuwana majekiseni kunosiya vazhinji vevanhu pasi "vari panyatwa yehutachiona."
Musoro we World Health Organization (WHO) yazivisa nhasi kuti nyika parizvino iri mumatanho ekutanga echitatu yevhavha yeCOVID-19.
Director General weWHO Tedros Adhanom Ghebreyesus akataura mumashoko ake ekutanga kumusangano wechisere weHR Emergency Committee ye COVID-8 kuti muvhiki rapfuura nyaya dze COVID-19 dzaiwedzera pasi rose, uye rufu rwatanga kukwira zvakare.
"Isu tave mumatanho ekutanga efungu rechitatu," akadaro Ghebreyesus.
Uyezve, "kufa kuri kuwedzera zvakare" mushure memasvondo gumi ekuderera, akawedzera. "Musiyano weDelta ndechimwe chekufambisa kukuru kwekuwedzera kuri kuitika mukutapurirana, kwakasimudzirwa nekusanganiswa kwenzanga nekufamba, uye kushandiswa kusingaenderane kwehutano hweveruzhinji nehutano hwevanhu," akadaro.
Sekureva kwaGhebreyesus, "musiyano weDelta ikozvino wave munyika dzinopfuura zana nemakumi manomwe," saka WHO inotarisira kuti "munguva pfupi iri kuuya ichave iri dambudziko reCCVID-111 rinotenderera pasirese, kana risati ratovepo."
The WHO musoro wakarova "musiyano unokatyamadza mukuparadzirwa kwepasi pemishonga". Zvichakadaro, kushomeka kwekuwana majekiseni kunosiya vazhinji vevanhu "vari panyasha dzehutachiona", director general weWHO akataura achirangarira kuti "nyika zhinji hadzisati dzawana chero majekiseni, uye mazhinji haana kuwana akakwana".
Hawaii COVID-19 Dambudziko reNgozi Kubva Kumusoro kuenda Pakati
Yakagadzirira kuita pati zvakare: Kutengeswa kweChampagne kuri kuseta nyowani ...